Moowshin dib loogu celiyey qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka
WARARKII: AUG 26, 2007
Daahir Riyaale “Dowladda Itoobiya waxaan isku soo afgaranay”
Nin lagu dilay Magaalada Baydhabo
Qayb kale oo ciidamada Uganda ah oo Muqdisho soo gaaraya
Qaraxyo iyo weeraro shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho
.Xariga saddex gudoomiye oo la dhigay xabsiga Baydhabo oo abuuray xiisad
.Mowliid Macaane “Qaar ka mid ah Guddiga Olombikada waxay jabiyeen sharciga u yaala Isboortiga”
.Tababarayaashii Xulka Qaranka Soomaaliya oo la magacaabay
Wararkii: SomaliTalk.com | Muqdisho
Iyadoo weli Magaalada Baydhabo ay ka socdaan shirarka Baarlamaanka ayaa wararka halkaasi ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ay soo gudbiyeen moowshin ku aadan Gunooyinkii ay qaadan lahaayeen xildhibaanada Baarlamaanka. Xildhibaanadu waxa ay sheegeen in loo bahan yahay in laga dodo Gunooyinka la siinayo Xildhibaanada si loola socod, maadaama xiliyo kala duwan la qaatay mushaaro kala duwan. Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Max’ed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) ayaa sheegay in moowshinkaani uusan noqon mid laga dodo, balse uu yahay talo soo jeedin.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ka carooday arrintaasi, waxayna ku tilmaameen mid lagu caburinayo fikirkooda. Xubnaha Baarlamaanka ee soo jeediyey mooshinkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan moowshinkaasi, ilaa uu ka doodo Baarlamaanka.
Dhinaca kale Golaha Baarlamaanka ayaa u diyaargaroobaya sidii uu cod ugu qaadi lahaa heshiisyada ay Dowladdu la galeyso Shirkadaha Batroolka iyo Macaadinta, maadaama dhowr jeer ay soo noqnoqdeen arrimahaasi, sidoo kale maamul Gobaleedka Puntland ayaa isagu ka soo horjeeda in Baarlamaanku ka hadlo arrimaha Batroolka iyo Macaadinta. Maamul gobaleedka Puntland waxa ay sheegeen in ay u madax banaan yihiin in ay heshiis la galan cid kasta oo Bartool ama macdan ka qodeysa deegaanada maamulkaasi, hase yeeshee Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi ayaa isagu doonaya in uu hor dhigo Baarlamaanka sharcigaasi, waxa uuna sheegay dhawaan in uu kalsooni buuxda ku qabo in Baarlamaanku ansixin Doono sharcigaasi, maadaama shirkadaha doonaya in ay Macaadin iyo Shidaal ka qodaan Soomaaliya ay marba marka ka dambeysa soo kordhayaan.
Madaxweynaha maamulka la magacbaxay Somaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib markii uu saddex maalmood oo booqasho ah ku tagay dalka Itoobiya, isagoo sheegay in uu halkaasi ku tagay martiqaad uu ka helay dowladda itoobiya, waxa uuna sheegay in uu la kulmay ra’isul Wasaaraha d alka Itoobiya oo uu sheegay in ay isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa xiriirada u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya, waxa uuna sheegay in Dowladda Itoobiya ay ku heshiiyeen in la hirgeliyo isgaarsiin ka wada dhexeysa labada dal, waxaa kale oo uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii loo xoojin nabadgelyada Dowladda Itoobiya iyo Maamulka Somaliland.
Daahir Riyaale waxa wuxuu meesha ka saaray in ay ka wada hadleen arrimo la xiriira argagixisada, waxa uuna yiri isagoo arrintaasi ka hadlayey “Arrimahaasi kama wada aan hadlin, balse waxaan ka hadlay arrimaha quseeya labada dhinac, ee dhinaca nabadgelyada, maadaama wixii ka dhaca Itoobiya ama wixii ka dhacay Somaliland ay saameyn ku yeelanayaan labada dhinac”.
Wararka ka imaanaya Magalada Baydhabo waxay sheegayaan in Ciidamada Dowladda Federaalka ay shalay toogteen nin is hor taagay guryo laga dhistay suuqii hore ee badarka ee Magaalada Baydhabo.
Guryahan oo gaaraya ilaa iyo 18 guri ayaa waxay ka mid ahaayeen guryihii dowladda.
Ninkaasi ayaa waxaa dilkiisa ka xumaaday dadweynaha deegaanka oo qaarkood sheegay in si gardaro ah lagu dilay ninkaasi, hase yeeshee nin u hadlay Booliiska waxa uu sheegay in ninkaasi uu sameeyey is hor-istaag cad oo la xiriira burburinta guryahaasi.
Waxaa maalmahan Magaalada Baydhabo ka socday burburinta Guryaha sharci darada ah iyo waliba kuwa Dowladda ee la dhistay, waxaana Magaalada Baydhabo laga nadiifiyey guryihii ku yaalay wadooyinka kuwaas oo caqabad ku ahaa bilicda Magaalada Baydhabo iyo waliba isku socodka dhaqdhaqaaqyada Bulshada iyo waliba kuwa Gadiidka.
Maalintii shalay ahayd Muqdisho waxay ahayd weerar qaraxyo iyo dilal, waxayna qaraxyadii ugu dambeeyey ka dhaceen Suuqa Xoolaha, Xamarweyne iyo Hawlwadaag, waxaana qaraxyadaasi lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya iyo kuwa Dowladda.
Qarax lala beegsaday ciidamada Itoobiya oo marayey wadada Suuqa Xoolaha, ayaa qaraxaasi kadib waxay ciidamada Itoobiya fureen rasaas waxayna halkaasi ku dileen labo qofood, dhowr kalana way ku dhaawaceen, sidoo kale qarax labaad ayaa waxa uu ka dhacay isla deegaankaasi, oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka oo la sheegay in waxyeelo gaarsiisay ciidamada Dowladda.
Qaraxna isna lala beegsaday saldhiga ciidamada Booliiska ee Xamarweyne, waxayna mas’uuliyiinta booliiska ee saldhigaasi sheegeen in aysan cidina wax ku noqono, waxaa kale oo uu qarax ka dhacay wadada wadnaha ee Hawlwadaag kadib markii lala beegsaday gaari halkaasi marayey.
Dhanka kale waxaa shalay agagaarka shirkadda Hormuud lagu toogtay nin shaqaale ka ahaa Shirkadda Hormuud oo lagu magacaabi jiray Cabdi Aadan Max’ed, waxaana dilkiisa gaysatay labo dhallinyaro ah, waxaa kale oo kooxo hubeysani damceen in ay dilaan nin watay gaari Garaasiido ah oo marayey agagaarka Dahabshiil, markii uu ninkii baxsay kadib ayay kooxdii la sheegay in ay gaarigii rasaas la dhaceen, kadibna isaga tageen..
Xariga saddex gudoomiye oo la dhigay xabsiga Baydhabo oo abuuray xiisad
Wararka naga soo gaaraya Gobalka Baay waxa ay sheegayaan in gobalkaasi uu ka oogan yahay qalalaase iyo caro weyn oo ay Bulshadu ka qabaan xariga saddex guddoomiye oo haatan ku xiran gobalka Bay ee Magaalada Baydhabo.
Waxaa xarigaani ka carooday dadweynaha magaalada Baydhabo oo dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan xarigaasi, waxayna dalbanayeen in si dhaqsi leh looga sii daayo raggaasi.
Xildhibaanada ka soo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle ayaa waxaa la sheegay in ay si aad ah uga careysan yihiin xariga saddexda guddoomiye, waxayna sheegeen in ay yihiin kuwo u xiran qaab siyaasadeed, waxayna dalbadeen in la sii daayo raggaasi.
Dhawaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ay soo xireen guddoomiyayaasha degmooyinka Buur-Hakaha, Qansax Dheere, iyo Diinsoor
Todobaadka soo socda ayaa la filayaa in Magaalada Muqdisho ay soo gaaraan ilaa iyo 250 askari oo Ciidamada Uganda kuwaas oo qayb ka noqon doona ciidamada AMSON oo horey u joogay Magaalada Muqdisho, waxayna tirirada horey u joogay ka dhigayaan 1850 Askari.
Ciidamadaas ayay dowladda Uganda sheegtay in sababaha loo keenayo ay tahay baahi loo qabo dhanka nabadgelyada, isla markaana ay xoojin doonaan dhanka nabadgelyada Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Uganda ayaa iyagu horey waxay u joogeen garoonka Diyaaradaha Muqdisho, Dekedda weyn ee Magaalada Muqdisho iyo xarunta Madaxtoonyada, waxayna halkaasi ka qabtaan arrimo la xiriira dhinac nabad sugida.
Dowladda Uganda waxay sheegtayin ciidamadeeda aysan u socon in ay ka qayb-qaataan iska hor imaadyada ka jira dalka Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay ka qayb-qaadan doonaan sidii loo sugi lahaa nabadgelyada dalka Soomaaliya.
Mowliid Macaane “Qaar ka mid ah Guddiga Olombikada waxay jabiyeen sharciga u yaala Isboortiga”
Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga Dowladda Federaalka Mowliid Macaane Maxamuud ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in qaar ka mid ah Guddiga Olombikada Soomaaliyeed ay ku xadgudbeen dastuurkii iyo xeerkii u yiilay Isboortiga Soomaaliyeed, isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaban doono, doorashooyinkii Guddiga Olombikada Soomaliyeed iyo xiriirada.
“Anigu cid aan wax u qabo ma jirto, balse waxaan ku taaganay in la dhowro dastuurka” ayuu yiri Mowliid Macaane oo sheegay in mudadii 17-ka sano ahayd dalka aan laga dhisin naadi Kubbadda Koleyga ah, isagoo sheegay in Guddiga Olombikada Adduunka ay ku bixiyaan lacag fara badan.
Mowliid Macaane waxa uu sheegay in xubno ka mid ah Guddiga Olombikada Soomaaliyeed ay iska maamulanayeen lacagihii loogu talagalay in lagu hormariyo Isboortiga Soomaaliyeed, dhinaca kale Mowliid Macaane waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay in Muxiyadiin Darbaweyne uu ku dhaqmo waxyaabo qiyaali ah oo uu sheegay in xiriirka K/cagta ee haatan jira uu madax yahay Siciid Max’ed Nuur (Mugaanbe), isagoo sheegay in ay aqoonsan yihiin xiriirka K/cagta Adduunka ee FIFA iyo xiriirada K/cagta ee Afrika ee CAF, waxa uuna ugu hambalyeeyey Xiriirada K/cagta Soomaaliyeed sida ay mar kasta uga dhex muuqdaan tartamada Qaaradda Afrika
Tababarayaashii Xulka Qaranka Soomaaliya oo la magacaabay
Kulan ay isugu yimaadeen Guddiga Fulinta Xiriirka Soomaaliyeed ee K/cagta, uuna shir guddoominayey Guddoomiyaha Xiriirka Siciid Mugaanbe ayaa waxaa looga hadlay sidii loo diyaar-garoobi lahaa tartanka is-reebreebka K/cagta Adduunka maadaama xulka qaranka Soomaaliya uu ku soo beegmay xulka wadanka Swaziland.
Xiriirka K/cagta waxa uu markiiba muhiimadda siiyey sidii loo magacaabi lahaa tababarayasha laylinaya labada kulan ee uu yeelanayo qaranka Soomaaliyeed ee K/cagta.
Markii dhinac walba laga rog ay oo dhinac walba laga fiiriyey aya waxaa la isku afgartayin tababaraha koowaad uu noqdo Tababare Cawil, midka labaadna uu noqdo Tababare Cali Buu.
Dr, Saadaq Yuusuf Khasaaro, C/llaahi Max’ed Xasan (Black), C/raxmaan Max’ed Xasan (Tuur), C/casiis Max’ed Xasan (Dhegaweyne), Cali Max’ed Xasan (Makuunbe), C/raxmaan Max’ed Aadan (Dirham), C/samad Max’ed Xasan (Blackyare), Axmed Wali Sheekh Cabdi, Yaxye Yuusuf Khasaaro, Haaruun Yuusuf Khasaro (Sheeno), Faarax Max’ed Cali (Blue), Max’ed C/llaahi Axmed (Xabeeb), C/fitaax Axmed Cilmi, dhamaan Reer Yuusuf Khasaaro, reer Max’ed Xasan, Bahda Saxaafadda, Bahda Isboortiga, waxayna hambalyo, bogaadin iyo tahniyad u dirayaan Amiin Yuusuf Khasaaro iyo Xaawo Kiin Max’ed Faarax oo 24-ka bishan Gabari ugu dhalatay Isbitaalka Xaawo Cabdi, waxayna leeyihiin noqo tii dalkeeda iy dadkeeda anfacda.